निजामती सेवामा सहसचिव पदमा रहेका केदार पनेरुले ‘सेतो याक’ नामक उपन्यास हालै पाठकसमक्ष ल्याएका छन् । सरकारी कर्मचारीसँगै उनको नयाँ परिचय थपिएको छ – साहित्यकार ।
काठमाडौंको दिक्दार जिन्दगीबाट शुरू भएको सेतो याकको कथा हिमाली जिल्ला रसुवा केन्द्रित छ । रसुवा जिल्लाको खैंदी, टिमुरे र लाङटाङ हिमालका परिवेशलाई उपन्यासमा उत्कृष्ट ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
उपन्यासको शुरूवाती शिल्पशैलीले पाठकलाई पनि यात्रामोह जगाउन सक्ने खालको छ । दाजुभाउजुको हेला र अपमानले विरक्तिएर घर छाडेर हिँडेकी निमा हिमाल आरोह गर्ने पर्यटकको भरिया हुन्छे । त्यही क्रममा निमाको भेट स्वीजरल्याण्डका पिटरसँग हुन्छ । पिटर राम्रो नेपाली बोल्न सक्छन् । यात्राकै क्रममा निमा र पिटर नजिकिन्छन्, प्रेममा पर्छन् । उनीहरूको प्रेमलाई पनेरुले रोमाञ्चक ढंगले पस्केका छन् ।
पिटर र निमाको प्रेम झांगिएपछि उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुग्छन् : २ धड्कनको आवाज एकै भयो । पिटरको बलियो पाखुराभित्र कसिँदै गई निमा । हिमालको चिसो फेदीमा जोडिए एकअर्काका ताता ओठ । उनीहरूले सँगै फेरेको सास उड्दैउड्दै गएर हिमालको हिउँसँगै मिसियो । अलिकति लजायो हिउँ र पोखियो सल्लाका पातहरूमा । पिटरको नाङ्गो छातीमा भर्खरै फक्रँदै गरेका निमाका छातीका दुई फूलहरू सर्लक्क पोखिए । त्यो चिसो वातावरणलाई जित्दै लग्यो निमा र पिटरको तातो शरीरको बाफले । भोटेकोशीको भेलभन्दा तीव्र गतिमा उर्लियो उनीहरूको नशानशाको रगत । चुर्लुम्मै डुबे एकअर्कामा । चरमोत्कर्षमा पुग्यो उनीहरूको बेहोशीपन । निकै बेरको उर्लंदो भेल शान्त भयो दुवैको जब निमाले आफूलाई निर्वस्त्र पाई ।
सँगै बाँच्ने कसम खाएर निमालाई दुई जिउकी बनाएका पिटरले एकाएक किन निमालाई छाड्छन् ? यसका लागि पाठकले उपन्यासलाई अन्तिमसम्म पढ्नैपर्छ ।
पढ्दै गर्दा उपन्यासमा प्रेम, यात्रा र यौन पाइन्छ तर ठाउँ–ठाउँमा कहानी यसरी मोडिन्छ, जसमा पाठकमा अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता सिर्जना गराइदिन्छ ।
पिटर विना उनको नासो पेटमै बोकेर हिँडेकी निमाको दुःख कहालीलाग्दो छ । बाँच्नका लागि उनले गरेको संघर्ष र जिन्दगीबाट हार खाएर आत्महत्या गर्न खोज्दाको परिस्थितिले मन छुन्छ ।
दोर्जे निमाको मित दाजु । निमालाई पुनः समाजमा स्थापित गराउन अनवरत लागिरहने दोर्जे र उनको उनको प्रेमका प्रसंगले रोमाञ्चित बनाउँछ । ७ वर्षको उमेरमै पिटरको नासो फुर्वाले आफ्नी आमा गुमाउँछ र दोर्जेलाई पनि ।
आमा निमा र दोर्जेलाई गुमाएको फुर्वालाई पेमाले स्याहार्छिन्, लालनपालन गर्छिन् । फुर्वा र डोल्माले कथालाई बाँधेर राख्छन् । कथा पढ्न बसेपछि नसकुञ्जेल उठ्नै मन लाग्दैन ।
तर एक्कासी पेमा र उनको गाउँलाई छाडेर छोरा दावासहित फुर्वा र डोल्मा खैंदी छाडेर टिमुरे झर्छन् । उनीहरू टिमुरे झर्नुपर्दाको बाध्यताले पाठकको आँशु खसालिदिन्छ ।
उपन्यासमा समाजका सानासाना विषयवस्तु र त्यसले पार्ने प्रभावलाई गज्जबसँग उल्लेख गरिएको छ । हिमाली भेगका वासिन्दाले भोग्दै आएका समस्या, अशिक्षा र गरीबीलाई पनि उपन्यासमा उनिएको छ ।
पनेरुले उपन्यासमा दुःखका कहानी र रोदनलाई मात्रै महत्त्व दिएका छैनन्, पाठक किताबमै अल्झाइरहन प्रेम र यौनलाई ठाउँ–ठाउँमा ‘स्पेस’ दिएका छन् । नाम्चे र डिकीको प्रेम कहानीले पनि पाठकलाई पढिरहन मन लाग्ने बनाउँछ । अझ डिकी पात्रको चरित्रले समाजमा नदेखिएको भित्रिपाटोलाई उजागर गरेको छ ।
पनेरु रसुवागढी नाकामा भन्सार प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहेका कारण उनले हिमाली परिवेशलाई उपन्यासमा दुरुस्तै उतारेका छन् । यो उनको खुबी हो ।
बच्चादेखि नै आफ्नो विदेशी पिता ‘आप्पा’ लाई सम्झिरहने, उनको अनुहार हेर्न लालायित हुने फुर्वाले संयोगवश भेट्छ तर उनी पिटर नभइ ‘सेतो याक’को रूपमा हुन्छन् । छोरा फुर्वाले बुढ्यौली उमेरमा पिताको अनुहार हेर्न पाउँछ ।
उसले छोरा फुर्वालाई निमाबाट टाढिनुको विवशता सुनाउँछन् र अर्को जुनि निमासँगै नेपालमा अझ रसुवामै जीवन व्यतित गर्न पाउँ भन्ने भनाइले पिटरको नेपाल मोहलाई झल्काउँछ ।
पिटरले निमासँगको प्रेम र उनीसँग बिताएका पलहरूलाई संगालेर राखेको उपन्यासमा उल्लेख छ ।
उनीसँग समय बिताउन पाउँदा फुर्वाको परिवारसँगै सिंगो टिमुरे गाउँमा नै खुशीयाली छाउँछ । कारण हो – उनले टिमुरे लगायतका क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान गरेका छन् ।
पिटर एकाएक कसरी सेतो याक हुन गए ? त्यसका लागि पनि उपन्यास पढ्नुपर्छ ।
उपन्यासको बलियो पक्ष भनेको उत्तरी हिमाली जिल्ला रसुवाका वासिन्दाको इमान्दारिता, परम्परा, संस्कृति र जीवनशैलीलाई बडो शिलशिला मिलाएर प्रस्तुत गरिनु हो । उपन्यासका पात्र र कथामा देखिएका ट्विस्टले पाठकलाई अन्तिम पृष्ठसम्म लान उत्प्रेरित गराउँछ । पुस्तकमा नेपाली महिलाको विदेशी मोहलाई पनि देखाइएको छ ।
उपन्यासलाई कुनै नाम चलेका प्रकाशन गृहले बजारमा ल्याएको होइन र पनि उत्कृष्ट छ । नाम चलेका पब्लिकेसनले मात्रै स्तरीय किताब निकाल्छ भन्ने भ्रमलाई चन्दा पनेरु प्रकाशक रहेकी सेतो याकले गतिलो झापड दिएको छ ।
अझ यसको आकार हेर्दा के होला र भन्ने भ्रम पर्न सक्छ पाठकमा तर कथा पढेपछि लाग्यो सेतो याकले १८५ पेजको ३०० रुपैयाँ तोकेको मूल्य जायजै लाग्छ । किताबलाई डीबीओ प्रेस मुद्रण गरेको छ ।